न्याय दिन चुकेको नेपाली राजनीति | चितवन पोष्ट
न्याय दिन चुकेको नेपाली राजनीति
बिहिबार, साउन २२, २०७७
राजनीतिले राज्य सञ्चालन प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका निर्माण गर्छ । यी तीन अंगले आपसी तालमेल र सन्तुलन कायम गरी राष्ट्र सञ्चालन गर्छन् । यस कुरालाई प्रमाण मान्दा भन्न सकिन्छ कि राजनीति नै सबैभन्दा पहिलो न्यायालय हो । यो राजनीति नामको अदृश्य न्यायालयले हरेक चीजलाई नियन्त्रणमा राख्छ । सन्तुलन मिलाउँछ, तर जब राजनीति आफैँमा सन्तुलनमा रहन्न तब राष्ट्र सञ्चालन प्रक्रिया पूरै वा आंशिकरुपमा अवरूद्ध हुन्छ ।
आज नेपालको राजनीति आफैँमा सन्तुलित नहुँदा मुलुकको आर्थिक, सामाजिक समृद्धिमा रोकावट पैदा भएको छ । फेरि राजनीतिमा एक वा दुई कारणले अवरोध सिर्जना भएको होइन, थुप्रैथुप्रै कारणहरु देखा परेका छन् । राजनीति के हो बुझ्दै नबुझी राजनीतिक फाँटमा हाम फाल्नेहरु लाखौँ छन् यो देशमा । राजनीति सेवा हो । राजनीति न्याय हो, तर राजनीतिको तागतलाई भौतिक समृद्धि हासिल गर्ने साधनका रुपमा राजनीतिक खेलाडीहरुले प्रयोग गर्दा राजनीतिमा अस्थिरता देखियो । राजनीतिले निर्माण गरेको कानुन तोडियो र यसैका कारण सबैखाले प्रगतिमा पूर्णविराम लाग्दै गयो । अहिले नै नेपालको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरु आपसमै मौखिक भिडन्तमा ओर्र्लिएका छन् । कुनै बेलाको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण भई निर्वाचनमा जाँदा स्पष्ट बहुमत हासिल गरी सरकार सञ्चालन गर्दासमेत जनताको आशा र अपेक्षामा घात हुने अवस्था सिर्जना हुने डर पैदा हुन गएको छ । केही दिनअघिदेखि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग एकथरी नेताहरुले राख्नुभएपछि राजीनामा माग्ने र त्यसका लागि तयार नहुने पक्षबीच तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध जनताको माझैमा आएपछि निराशा छाउन सुरू भएको हो । जनता चाहन्छन् सरकार पूरा पाँच वर्ष चलोस् । जनताको माग यो होइन कि कम्युनिस्ट पार्टीको फलानो नेता प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री जोसुकै भएपछि पूरा आयुको सरकार हुनुपर्छ र जनउत्तरदायी सरकार हुनुपर्छ । अहिले केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । सहमतिमा कोही अर्को नेता प्रधानमन्त्रीको रुपमा देखा पर्ने विषय अलग्गै हो, तर असहमतिका बीच प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्ने कुरा उठ्दा यसले द्वन्द्व सिर्जना गर्ने र त्यसको नकारात्मक असर सिङ्गो मुलुकमा पर्ने साँचो हो । तर, करिब २ महिनाअघिदेखि सुरू भएको किचलोको अहिलेसम्म अन्त्य भएको छैन । भन्न सकिने अवस्था छैन कि पार्टी फुट्छ, सहमति हुन्छ वा यही ङार्रङुर्रवाला सम्बन्धले नै अर्को चुनाव भेट्छ । यी तीन अवस्थामध्ये हार्दिकतापूर्वक सहमति कायम भइ पाँचैवर्ष केपी ओलीले शासन चलाउने र अर्कोपटकको निर्वाचनमा अहिले सक्षम ठहरिएका नेताहरुमध्येबाट संसदीय दलको नेता चुनिएर प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था सिर्जना गर्दा कल्याण हुने देखिन्छ ।
यतिनै बेला अर्को प्रतिपक्षमा बसेको नेपाली कांग्रेस पार्टीमा समेत आन्तरिक संघर्ष चुलिएको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले चुनावलक्षित क्रियाकलाप पार्र्टी विधानविपरीत गर्नुभएको आरोपसहित लिखितरुपमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले असहमति पत्र बुझाउनुभएको छ । मुलुकमा कोरोना भाइरसको आतङ्कले सिर्जना गरेको अन्योलताका बीच संक्रमित हुनेको संख्या बढ्दै गएको अवस्थामा कतै मर्नेहरुको संख्यासमेत अकल्पनीय ढङ्गले बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको बखत सरकारलाई खबरदारी गर्ने शक्ति नेपाली कांग्रेस आन्तरिक कलहमा डुब्नु कदाचित उपयुक्त हुने कुरा होइन । कुरा नेपाली कांग्रेसको मात्रै रहेन, सानो भर्खर भर्खर जन्मिएका विवेकशील साझा पार्टीमा समेत असहमति सिर्जना भई केन्द्रीय तहका नेताहरु समेतले राजीनामा दिएको अवस्थाले यही संकेत गर्छ कि फेरि पनि नेपाल राजनीतिकरुपले सङ्लो हुन केही समय लाग्नेछ । कारण खोज्नेहरुले नेपालको राजनीति किन सङ्लो भएन र यसले किन न्याय दिन सकेन खोज्न सक्छन् र यस्ता कमजोरीहरु भेट्नेछन् ।
सबैभन्दा पहिला त नेपालको हकमा केही काम नपाएका बेरोजगारहरु नै राजनीतिमा हाबी भए ठूलो संख्यामा । अहिले झन्डै दुई दशकअघिदेखि भने पढेलेखेका शिक्षितहरु समेत राजनीतिमा आउने क्रम सुरू भएको छ । राजनीतिमा जानेबुझेका भन्दा कम जानेका र निजी स्वार्थ पूरा गर्न चाहनेहरु नै अग्रभागमा देखा परे । राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरु आफू बाँच्ने र परिवार पाल्ने कामका लागि चाहिने धन राजनीति मार्फत नै लिन लागे । यहाँनेर नेपालको राजनीति चुक्यो । हो, राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता बाँच्नका लागि धन चाहिन्छ, तर तिनलाई बाँच्नका लागि चाहिने आर्थिक व्यवस्थापन कानुन संविधान निर्माण गर्दाका बखत नै निक्र्यौल गर्नुपथ्र्यो, त्यो गरिएन । पदमा पुगेपछि तलब र भत्ता वृद्धिमार्फत जीवनयापन गर्ने पद्धति स्थापना गर्दा आफ्नो हातमा निर्णय गर्ने अधिकार आएपछि जनप्रतिनिधिको रुपमा उदाएका नेताहरुले चाहिनेभन्दा ज्यादा रकम लिन लागे । जनतालाई यो प्रक्रिया मन परेन । जनस्तरबाट विरोध हुन थाल्यो ।
जनप्रतिनिधिहरुले त्यो तरिकाबाट रकम लिँदा अनेक कोणबाट विरोध हुन थाल्यो । सबै राजनीतिज्ञहरु र सबै जनप्रतिनिधिहरुले नसुहाउने तरिकाले रकम लिए भन्ने होइन, इमानदारहरु पनि देखा परे । बैठक भत्तासमेत नलिनेहरु समेत फेला परे, तर पनि सोचेअनुरुप राजनीतिले न्याय दिन सकेन । हरेक राजनीतिक कार्यकर्ता खुबीवान् र अध्ययनशील हुनुपर्छ, त्यो अवस्था भेटिएन । सुनिन्छ, थुप्रैथुप्रै नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई यो देशको राष्ट्रिय गानसमेत गाउन आउँदैन । नेपालमा कति जनसंख्या छ त्यो थाहा छैन । नेपालको जमिनको क्षेत्रफल कति हो त्यो थाहा छैन । नेपालमा कति जातजाति र भाषाभाषी छन्, धेरैले अध्ययन गरेका छैनन् । कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिएको ३० वर्ष भयो भन्नेलाई आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा कति सदस्य छन् थाहा छैन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जन्म कहाँ, कहिले र कसको नेतृत्वमा भयो त्यो पनि थाहा छैन । खासमा कम्युनिस्ट भनेको के हो त्यो राम्रोसँग थाहा छैन, तर कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता भएको निकै लामो समय बितेको छ । यो तरिकाले चलेको कम्युनिस्ट पार्टीबाट जनताले के आशा गर्ने ?
नेपाली कांग्रेसको पनि कुरा उस्तै उस्तै छ । लोकतान्त्रिक समाजवाद भनेको के हो ? धेरैले सिकेका छैनन्, तर कार्यकर्ताचाहिँ नेपाली कांग्रेसकै हुन् । कम्युनिस्टभन्दा नेपाली कांग्रेस के मानेमा फरक छ, त्यो नजानीकनै चारतारे झन्डा बोकेका छन् । देश र जनताको पक्षमा सधैँभरि क्रियाशील र अध्ययनशील हुनुपथ्र्यो, तर नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता र नेताहरु सदाबहार चुनावमुखीमात्रै भएको देखियो । जब चुनाव नजिकिन्छ तब सल्बलाउने होइन भने चुपचाप अर्को निर्वाचन पर्खिने गरेको देखियो । कांग्रेसको यो खालको कमजोरीले पनि नेपाली राजनीतिलाई फाइदा पुगेन । राजनीतिक नेता र कार्यकर्ता सामान्य नागरिकभन्दा अलग हुन्, यो साँचो हो । किन पनि अलग हुन् भने नीति निर्माण र कार्यान्वयनमार्फत सिङ्गो देश र जनतालाई डो¥याउने काम तिनैले गर्छन् । यसका लागि हरकोणबाट राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताले आफूलाई सक्षम तुल्याउनुपर्नेमा ज्ञान, सीप र क्षमता अभिवृद्धि प्रक्रियाबाट टाढा राख्दा नेपाली राजनीतिले आजसम्म देश र जनतालाई न्याय दिन सकेको छैन । नेपाली जनताले त्यो दिनमात्रै न्याय पाउनेछन् जतिबेला हरेक राजनीतिक दलका हरेक नेता तथा कार्यकर्ता अध्ययनशील हुनेछन्, निजी स्वार्थमा नभई राष्ट्रहितमा समर्पित हुनेछन् र सदासदा कर्तव्यनिष्ट हुनेछन् ।
स्थानीय तहका निराशाजनक शैक्षिक अभ्यासहरु
37 mins पहिले
समृद्ध भरतपुर महानगरका लागि अवसर र चुनौती
42 mins पहिले
जीवनको वास्तविक अर्थ के हो ?
भाषा ठूलो कि पैसा ?
क्यान्सर रोगबारे सचेतना जरूरी
नेपालमा क्यान्सर अस्पताल स्थापना भएको दिनलाई राष्ट्रिय क्यान्सर सतर्कता दिवस मनाइँदै आएको छ । सोही अवसरमा विपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर...
383 शेयर गर्नुहोस्
कालिका मन्दिरको अध्यक्षमा काशीनाथ
हात्तीले भत्काएको घर बनाए युवाले